SOOMALIYA: Wararkii U Danbeeyay Rabshadihii Muqdisho. – somalilandtoday.com
SOOMALIYA: Wararkii U Danbeeyay Rabshadihii Muqdisho.
(SLT-Muqdisho)Dad Aad ufara badan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka carooday dil askari ka tirsan ciidamada dowladda uu u geystay ruux Bajaajle ahaa.
Dilka ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, waxaana dadka banaanbaxa dhigaya ay gubeen Taayaro, iyagoo sidoo kale xiray goobo ganacsi oo ku yaala goobta banaanbaxyada ka dhacayaan.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in askariga dilay mooto bajaajlaha sidoo kale inuu dilay ruux rakaab ahaa oo Bajaajta saarnaa, waxaana uu dhaliyay banaanbaxyada xoogan ee halkaasi ka socdo.
Dad badan oo wadayaal Mooto Bajaajta iyo shacab badan ayaa banaanbaxa dhigaya, waxaana ay dalbanayaan in cadaalada la horkeeno ruuxa dilka ka dambeeyay.
Ma jiro ilaa iyo hadda cid ka hadashay dilka iyo banaanbaxyada ka dhacaya isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, iyadoo dadka banaanbaxa dhigaya ay sheegeen inaysan joojin doonin banaanbaxa ilaa laga qabto askarigii dilka geystay.
Dilka kadib ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa tegay goobta, iyaga oo meesha ka qaaday meydka Darawalka Mooto bajaajlaha ahaa, waxaana sidoo kale dhaawaca ruuxa kale loo qaaday isbitaalka ku yaalla degmada Howlwadaag.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa inka badan 20 ruux oo bajaajlayaal ah ku dilay magaalada Muqdisho, waxaana kaliya ilaa iyo hadda cadaalada la horkeenay labo askar